Sida loo ka iPhone Delete playlist Kolkiiba
> Resource > iPhone > Sida loo Delete playlist ka iPhone Kolkiiba
Ma waxaad doonaysaa qaab fudud oo ay tirtirto playlist ka iPhone ah? Si aad u noqoto qof daacad ah, waxaad tirtiri kartaa playlist ka iPhone ah si toos ah oo aan alaab kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad abuuray daraasiin playlist on iPhone, waxaa muddo dheer qaadan doonto in aad tirtirto marka aad mar dambe ma doonayaan in ay dhegeystaan ​​kuwaas playlists jir. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay qalab xirfad iPhone in aad qabatid shaqada aad u. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto in qalab iPhone playlist saarista ah; ka Wondershare TunesGo . Iyada oo ay caawimaad, waxaad yeelan doontaa in ay soo saarto playlists badan intii aad jeclaan doonaa si isku mar ah. TunesGo si buuxda u taageersan oo dhan lagu daydo iPhone sida iPhone 5, 4s, 4 iyo 3GS in uu hadda socda ee macruufka 5 ama 6.
Fiiro gaar ah : Waxaad sidoo kale tirtiri kartaa playlists ka iPhone ah ee Mac la Wondershare TunesGo Mac . Si fudud u qabtaan midig guji playlist ka dooro Delete .
Sidee in ay tirtirto playlist ka iPhone ah si deg deg ah
In socda, waxaan idin tusin doonaa tutorial ka faahfaahsan oo ku saabsan sida loo tirtiri ah iPhone ee playlist tallaabo-tallaabo. Iyadoo TunesGo, waxaad tirtiri kartaa playlists caadiga ah ee aad iPhone effortlessly. Download this iPhone qalab saarista playlist aad kombuutarka oo raac talaabooyinka hoos ku qoran.
Talaabada 1: Isku iPhone la PC
Ka dib markii download ah, loo soo dajiyo iyo ordi qalab saarista iPhone playlist aad kombuutarka. Markaas, xiriiriyaan iPhone la PC ka via cable USB ah. Your iPhone la ogaan doonaa isla ka dib markii ay ku xiran tahay. Ka dib markii in, aad ku eegaan karo dhamaan macluumaadka ku saabsan iPhone in interface ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood aad kombuutarka hor inta aadan isticmaalin TunesGo. Haddii kale, TunesGo ma shaqeyn doono si sax ah.
Talaabada 2: Delete playlist on iPhone
Si aad u tirtirto ah iPhone ee playlist, waa in aad guji playlist ka Murayaad navigation in uu dhinaca bidix ee interface ugu weyn ee ay. Daaqadda playlist ee, dhammaan playlists aad iPhone la hir ku qoran doonaa. Waxaad markaa sii wadi karo si ay u doortaan playlist in aad jeclaan doonaa si ay u tirtirto. Inta lagu guda jiro habka takhalusid ah, inaad si fiican u sii lahaa aad iPhone ku xiran mar walba.
Eeg, la TunesGo ahaan aad doontaa in ay si deg deg ah iyo si guul leh tirtirto playlists rabin ka iPhone. Dhab ahaantii, ka sokow tirka playlists on iPhone ah, waxa kale oo aad kartaa in aad tirtirto songs on iPhone ee ku yaalla sidoo kale. Haddii aad qabto iPod ama iPad, waxa kale oo aad nuqul ka karaa iyo lagu wareejiyo playlists u dhexeeya, iPhone iPod iyo iPad wadaaga sidoo kale.
Raac Tutorial Video ah in ay tirtirto Playlists ka ah iPhone / p>